Ezona zicelo zibalaseleyo zokubukela ibhola | Amadoda aQinisekileyo
Ezona zicelo zibalaseleyo zokubukela ibhola
Ezi zixhobo zebhola ziyilwe kubo bonke abalandeli bezemidlalo kwaye ngakumbi olu didi. Ezinye izicelo ngaphandle kokubonelela ngeyona nkqubo ilungileyo kuthotho, iinkqubo kunye neemovie, zikunika ithuba lokuba Joyina ezemidlalo zibalaseleyo, ngakumbi ibhola.
Ezinye izicelo zebhola ekhatywayo ziyilelwe ngokukodwa ukuba zikwazi ukubukela kuphela lo mdlalo. Zonke zinokukhutshelwa simahlaNangona abanye bebonelela ngosasazo lwabo lwasimahla, kwabanye kuya kufuneka uhlawule umrhumo wenyanga ukuze ukwazi ukubukela.
Uninzi lwabo banikela ngeentlobo ezahlukeneyo kwimenyu yabo, Ukusuka kwiligi yaseSpain, iligi yase-Italiya okanye yesiNgesi kunye neminye imidlalo efana neMotoGP okanye iFomula 1.
1 Izicelo zebhola ekhatywayo phantsi kobhaliso kunye nentlawulo
1.1 NdinguMovistar +
1.3 I-Orange Tv
2 Usetyenziso lwebhola ekhatywayo ngokujonga simahla
2.1 Ngqo bomvu
2.2 IGP ngqo yaSimahla
2.4 IPirlo Tv
2.5 Ibhola ekhatywayo ebukhoma
2.6 Uhlobo lweAcerstream
Izicelo zebhola ekhatywayo phantsi kobhaliso kunye nentlawulo
Sisicelo esaziwayo kwaye sesona sifunwa kakhulu. Ngaphakathi kudidi lwayo kungena amandla okubukela uthotho, iimuvi, iinkqubo kunye nemidlalo emininzi. Inamalungelo eSpanish League kunye ne-UEFA Champions League kwaye ukuze uyibone kuya kufuneka wenze umrhumo kwaye uhlawule umrhumo wenyanga.
Esi sicelo sikunika yonke ibhola ekhatywayo kwaye Inika eyona nkcazo ilungileyo ukuze uyonwabele xa iyonkeKuba ibandakanya ividiyo yayo esasazwayo kunye nelungelo lokubukela umdlalo bukhoma.
Ayikuniki kuphela imidlalo edlalayo, kodwa ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zoncwadi kunye nodliwanondlebe nayo yonke into enxulumene nehlabathi lezemidlalo.
Lelinye lamaqonga kamabonwakude anikezela usetyenziso lwawo ukuze Ungayijonga imixholo yayo nakwesiphi na isixhobo. Ngokucacileyo, ukuze ujonge ibhola, kuya kufuneka wenze intlawulo yenyanga. Uhlobo lwayo lwesivumelwano kukukhetha iipakeji apho Unokuqesha iphakheji yebhola ekhatywayo ngeenkonzo zefowuni yakho.
Enye yezicelo ezikhethiweyo kuba ifikelele kubasebenzisi abangamawaka angama-90 ngaphakathi Play Store. Ungawubona wonke umxholo onomdlalo Phila kuwo onke amaqela, ubuntshatsheli kunye nezixhobo ozikhethayo.
Esi sicelo sikwavelele nesiqinisekiso esikunika sona kwaye sikwazi ukubona ibhola yebhola ekhatywayo. Ukuze ukwazi ukusebenzisa esi sicelo kufuneka wenze umrhumo kwaye ujoyine i-OpenFutbol de Open Cable. Ukuze ukwazi ukonwabela esi sicelo ngaphandle kokuntywila okanye ukunqumama, kungcono ubenesantya se-intanethi esingange-6 Mb.
Ukubonelela ngeyona nto ibalaseleyo yebhola kunye neligi yayo, njengoko unokufikelela kuyo yonke imidlalo yemidlalo yeveki, kubandakanya eyabafazi. Unika iinkqubo ezithetha ngayo, kunye nezishwankathelo kunye namanani, kodwa ewe, ngokuqinisekileyo ukuba ukufikelela kumxholo othile kuya kufuneka wenze uhlobo oluthile lokubhalisela okanye lokuhlawula.
Usetyenziso lwebhola ekhatywayo ngokujonga simahla
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ezi zicelo zibonelela ngeenkonzo zazo simahla kwaye akukho semthethweni kwaphela. Ithiyori yakhe isekwe "ekujongeni ukuba iwebhusayithi nganye iqulethe amalungelo okukhupha luxanduva lwabasebenzisi". Ukuba ungomnye wabo bafuna ukuzama, nazi ezi zisebenza ngokugqibeleleyo ukuza kuthi ga ngoku:
Esi sicelo sesinye sezona zaziwayo kwaye banikezela ngeenkonzo zabo iminyaka ukuze ubukele yonke ibhola iyadlala. Ikhutshelwe nguGoogle Play kunye neVenkile yeApple kwaye ihlala inikezela ngokhuseleko lwayo. Inika zonke iiligi zaseYurophu nezaseMzantsi Melika simahla.
IGP ngqo yaSimahla
Esi sicelo sinokukhutshelwa ngokulula kuso nasiphi na isixhobo. Nangona abaphuhlisi bayo bengabonisi ukuba ukubonwa kwayo kukhululekile, ngokwenyani kunjalo. Ikwabonelela ngomxholo ongaphezulu, njengecandelo elinazo zonke iziphumo, iinkonzo ezineempawu ezininzi, okanye iikhalenda zayo yonke imidlalo edlalwayo.
Ukungena kwiwebhusayithi yayo esemthethweni unokufikelela kwikhonkco ukuze ukhuphele usetyenziso lwayo. Sele sisicelo esidala kwaye saziwa ngabalandeli bebhola ekhatywayo. Ihlala iqinisekisa ukusasazwa kwayo kwaye ikhutshelwa kumawakawaka ezixhobo.
Njengazo zonke eziapps, ibonelela ngemidlalo yebhola ekhatywayo kunye nemidlalo ngaphandle kwemidlalo. Ungayikhuphela ngeGoogle Play kodwa kwiinkqubo ze-IOs ingakhululwa. Into oyithandayo ngesi sicelo kukuba ungabona ukuya kuthi ga kwimidlalo emibini ngaxeshanye kwaye ungayibukela naphi na apho ufuna khona.
Ibhola ekhatywayo ebukhoma
Enye yezicelo onokuzikhuphela kwiGoogle Play yakho. Inika usasazo ngqo lweemidlalo zebhola ekhatywayo kunye nesimahla. Kukalwe kakuhle kudidi lwayo kodwa abantu abaninzi bayaqhubeka nokukhalaza ngosasazo lwazo olubi ngaphandle kokwazi ukuba yimpazamo yezixhobo ezisetyenzisiweyo okanye uhlobo lwesantya esisetyenzisiweyo.
Esinye sezona zicelo zibalaseleyo zisebenze ngokugqwesileyo. Ungayibukela ibhola ekhatywayo bukhoma kwaye ikwi-Intanethi kuso nasiphi na iselfowuni. Ikhutshwe kuGoogle Play kwaye imixholo yayo kulula ukuyisebenzisa ngokulandela amanyathelo ayo ngokuchanekileyo. Ukuze ufikelele kwimidlalo yabo kufuneka ufumane amakhonkco amajelo kwi-intanethi. Ukuba ufuna ukwazi ngokweenkcukacha ezingakumbi ukuba ungangena njani kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Ezona zicelo zibalaseleyo zokubukela ibhola
Amadoda afuna izipho ezizezakho ekhitshini, nazo
Ungalivuyisa njani iqabane lakho